अमेरिकामा एकलाख बढिको मृत्यु, ट्रम्प भने गल्फमा रमाउदै ! – Durbin Nepal News
अमेरिकामा एकलाख बढिको मृत्यु, ट्रम्प भने गल्फमा रमाउदै !
जेष्ठ १२, २०७७ ११:४२ मा प्रकाशित
विश्वव्यापी काेराेना कहरकाे सबैभन्दा बढी क्षति व्यहाेरेकाे अमेरिकाले झण्डै एक लाख मानवीय क्षति व्यहाेरेकाे छ । प्रतिष्ठित ‘द न्यूयाेर्क टाईम्स’ले गत आईतवार प्रकाशित गरेकाे विवरण अनुसार अमेरिकाले गत तिन महिनाकाे अवधिमा एक लाख आफ्ना नागरिक गुमाउनु परेकाे छ ।
गत फेब्रुअरी२९ मा वाशिङ्टन राज्यमा एक बिरामीले काेभिड-१९ काे कारण ज्यान गुमाउनु परेकाे थियाे। तिन महिनाकाे हाराहारीमा अमेरिकाले एक लाख नागरिककाे ज्यान गुमाएकाे छ भने सत्र लाख भन्दा बढी मानिस भाईरस संक्रमित भएका छन् ।गत फेब्रुअरी महिनामा देखिएकाे यस महामारीकाे संक्रमण राेक्न ट्रम्प प्रशासन असफल भएकाे भन्दै विपक्षी दलले ट्रम्पकाे असक्षमताकाे कारण यति धेरै हताहती व्यहाेर्नु परेकाे टिप्पणी गरेका छन् ।
राष्ट्रपति ट्रम्प भने यसलाई अस्वीकार गर्दै आफ्नाे कुशलताकाे कारण संक्रमणमा कमि आएकाे र ज्यान गुमाउनेकाे संख्या कम रहेकाे जिकिर गरिरहेका छन् ।
विगत महिनाकाे तुलनामा गत साता बाट मृत्यु हुनेकाे संख्यामा केहि कमि आएकाे भएतापनि काेराेनाकाे संक्रमणमा कमी आउने सम्भावना त्यति धेरै नरहेकाे वैज्ञानिकहरुकाे दावी रहेकाे छ । राेग नियन्त्रण एंव राेकाथाम केन्द्रले आगामी हिउदँमा यसकाे प्रभाव थप धेरै हुन सक्ने भन्दै प्रक्षेपण गरेकाे छ।
खल्लाे भयाे -मेमाेरियल डे’
आज ‘मेमाेरियल डे’ अर्थात अमेरिकामा यसलाई शहिद दिवसकाे रुपमा मनाईन्छ । युद्धमा मारिएका आफ्ना सिपाही एवं याेद्धाहरुकाे सम्मानमा मनाईने यस ‘मेमाेरियल डे’ पनि काेराेना भाईरसका कारण आौपचारिक मात्र हुन पुग्याे ।
राष्ट्रपति ट्रम्प एंव प्रथम महिला मलनिया ट्रम्पले भर्जिनियाकाे आर्लिङ्टन स्थित नेशनल सेमेटरीमा शहिदहरु प्रति सम्मान प्रकट गरे र बाल्टिमाेर स्थित फाेर्ट मेकहेनरी पुगी देशकाे लागी ज्यान गुमाएका हरुकाे सम्मानमा श्रद्धान्जली दिए। तर याे बिशेष दिनमा पनि उनि बिवादमुक्त हुन सकेनन्।
राष्ट्रपति ट्रम्पले बाल्टिमाेरका मेयर माथि केहि समय अघि अपशब्द बाेलेका थिए। यसकारण मेयरले ट्रम्पलाई बाल्टिमाेर नआउन भनेका थिए। त्यसैगरी काेराेना भाईरसकाे कारण ज्यान गुमाउनेकाे संख्या करिब एक लाख पुग्नै लाग्दा राष्ट्रपति ट्रम्प भने गल्फ खेलिरहेकाे कारण अर्काे थप आलाेचना भईरहेकाे छ। राेग नियन्त्रण एंव राेकथाम केन्द्रले जारी गरेकाे निर्देशिका विपरीत माक्सकाे प्रयाेग बिना नै उनी भर्जिनिया र बाल्टिमाेर पुगे। केहि दिन पहिले काेराेनाकाे प्रभाव कम गर्न आफु सफल भएकाे बताएर ट्रम्पले यस महामारी बाट ज्यान गुमाएकाहरुकाे अपमान गरेकाे आराेप विपक्षी दलका नेताहरुले लगाएपनि उनले त्यसकाे प्रवाह गरेका छैनन्।
बरु तत्काल राष्ट्रकाे आर्थिक काराेवार सुरु गर्न दबाव दिदै आईरहेका छन्।
काेराेनाकाे कारण नै अधिकांश अमेरिकीहरुले सेमेटरीमा पुगेर आफ्नाे देशकाे खातिर ज्यान आहुती दिएकाहरु माथि सम्मान प्रकट गर्न सकेनन्। धेरैले सामाजिक सञ्जाल मार्फत शहिदहरु प्रति सम्मान प्रकट गरेका छन्।